ỊHAZI HUAWEI HG532E MODEM - NGWA - 2019
Anyị na-ahazi modem Huawei HG532e
Akaụntụ na-enye ọtụtụ ndị ohere iji akụ nke otu PC rụọ ọrụ nke ọma, ka ha na-enye ike ịkekọrịta data njirimara na faịlụ. Usoro nke ịmepụta ihe ndekọ dị otú a dị nnọọ mfe ma dị ntakịrị, yabụ ọ bụrụ na ị nwere mkpa dị otú a, jiri otu n'ime ụzọ iji tinye akụkọ mpaghara.
Ịmepụta akaụntụ mpaghara na Windows 10
Ọzọkwa, anyị ga-elebakwu anya na otu n'ime Windows 10 ị nwere ike ịmepụta akaụntụ mpaghara na ọtụtụ ụzọ.
Ọ dị mkpa ikwu na ịmepụta na ihichapụ ọrụ, n'agbanyeghị usoro ị họọrọ, ị ga-abanye dị ka onye nchịkwa. Nke a bụ ihe dị mkpa.
Usoro 1: Ngalaba
Pịa bọtịnụ ahụ "Malite" ma pịa na gia akara ngosi ("Nhọrọ").
Ọzọ, gaa na mpaghara "Ezinụlọ na ndị ọzọ".
Họrọ ihe "Tinye onye ọrụ maka kọmputa a".
Na mgbe "Enweghị m data ịbanye na onye a".
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji pịa eserese. "Tinye onye ọrụ n'enweghị akaụntụ Microsoft".
Ekem, ke window window injinde, tinye aha (nbanye ịbanye) na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, paswọọdụ maka onye ọrụ ahụ.
Usoro 2: Ogwe njikwa
Ụzọ iji tinye akaụntụ mpaghara, nke na-edeghachi nke mbụ.
Meghee "Ogwe njikwa". Enwere ike ime nke a site na ịpị nri na menu. "Malite", ma na-ahọpụta ihe achọrọ, ma ọ bụ jiri nchikọta isi "Merie X"akpọ otu menu.
Pịa "Akaụntụ Ndị Akaụntụ".
Ọzọ "Gbanwee Ụdị Akaụntụ".
Pịa ihe "Tinye onye ọrụ ọhụrụ na windo Ntọala Kọmputa".
Soro usoro 4-7 nke usoro gara aga.
Usoro nke 3: Iwu Iwu
Ọ bụ ngwa ngwa ịmepụta akaụntụ site na akara (cmd). Maka nke a, ị ghaghị ime ụdị omume ahụ.
Gbaa ọsọ ọsọ ("Malite-> Nweta Iwu").
Ọzọ, pịnye akara na-esonụ (iwu)
onye ozo eji eme ihe "aha njirimara" / tinye
ebe kama aha ị chọrọ ịbanye nbanye maka onye ọrụ n'ọdịnihu, wee pịa "Tinye".
Usoro 4: Windo Ikike
Ụzọ ọzọ iji tinye akụkọ. Yiri ka cmd, usoro a na - enye gị ohere ime usoro maka ịmepụta akaụntụ ọhụrụ.
Pịa "Merie R" ma ọ bụ mepee site na menu "Malite" window Gbaa ọsọ .
Na windo nke gosipụtara, họrọ ihe ahụ "Tinye".
Ọzọ, pịa "Banye na-enweghị akaụntụ Microsoft".
Pịa ihe "Akaụntụ Obodo".
Dee aha maka onye ọrụ ọhụrụ na paswọọdụ (nhọrọ) wee pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Ọzọkwa na window window, ị nwere ike tinye ụdọ ahụlusrmgr.mscnke ga - ebute oghere nke ihe ahụ "Ndị ọrụ mpaghara na otu dị iche iche". Na ya, ịnwekwara ike ịgbakwunye ụtụ.
Pịa ihe "Ndị ọrụ" Pịa aka nri ma họrọ na menu ndokwa "New User ..."
Tinye data niile dị mkpa maka ịgbakwunye akaụntụ ma pịa bọtịnụ ahụ. "Mepụta"na mgbe bọtịnụ ahụ gasịrị "Mechie".
Ụzọ ndị a niile na-eme ka ọ dị mfe ịgbakwunye akụkọ ọhụrụ na kọmputa nkeonwe ma achọghị ka ọkachamara pụrụ iche, nke na-eme ka ha dị ọbụna maka ndị na-enweghị ahụmahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ngwa 2019